यी ६ देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने यस्तो छ सरकारको तयारी, कुन-कुन हुन् ? – जलजला अनलाइन
यी ६ देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने यस्तो छ सरकारको तयारी, कुन-कुन हुन् ?
Posted on April 13, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on यी ६ देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने यस्तो छ सरकारको तयारी, कुन-कुन हुन् ?
चैत ३०, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएको देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यो खबर रमेश भारतीले खबरहबमा लेखेका छन् । सो अनुसार रोजगार गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौताका लागि छलफल र सम्झदारीका लागि आवश्यक ड्राफट आदानप्रदान गरिरहेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा मलेसियासँग (कत्तिक १२ ) श्रम सम्झौता, कोरियासँग पुनः श्रम (सम्झौता भदौ) जापानसँग एमओसीमा सम्झौता (चैत) सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । भने, मन्त्रालयलले कतार, युएई, ओमन, मोरिसस, पोल्याण्ड र बहराइनसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जसका लागि सबै देशसँग प्राविधिकसँग छलफल भइरहेकाले मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले मलेसिया, जापान र कोरिया रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा श्रम सम्झौता गर्दा फ्रि भिसा र टिकटमै पाउने गरी सहमति गरेको छ । श्रम सम्झौता गरेका देशमा जाने श्रमिकले निःशुल्क जाने पाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाली युवा रोजगारीमा जाने देशसँग श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्ने गरी श्रम मन्त्रालय छलफल गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार रोजगारीका लागि पठायो भने श्रमिकको सूरक्षा र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुदैन् । श्रम सम्झौता भएका देशमा गएका कामदारप्रति रोजगारदाता कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ । श्रम सम्झौता नगरेका देशमा श्रमिक समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न ग्राहो हुन्छ ।’ सरकारीस्तरमा भएको श्रम सम्झौताले श्रमिक लिने र दिने दुवैलाई सहज हुने उनको भनाई छ ।
नेपालबाट सस्थागता १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशमा नेपाली युवा रोजगारीका खोजीमा जाने गरेका छन् । यति धेरै देशमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गरेपनि सरकारले हाल ८ देशसगँ मात्र सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । हालसम्म कतार, बहराइन, युएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र मलेसिया गरी ८ मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सस्थागत १ सय २ वटा देशमा श्रम सम्झौता नगरी नेपाली श्रमिक आपूर्ति गरिँदै छ । श्रम सम्झौता भएका देशसँग ३ देखि ५ वर्षभित्र सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी कूटनीतिक नियोगमार्फत भिसा प्रमाणीकरण र प्रदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृति वितरण गर्ने काम पनि यहि सालबाट शुरु गरेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजिदै
श्रम मन्त्रालयले २०७५ सालमा नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको पनि खोजी गरेर नेपाली श्रमिक पठाउने योजना लिएको छ । श्रम मन्त्रालयले नयाँ रोजगार गन्तव्य देश खोजीका लागि एउटा कार्यदल नै बनाएर काम गरेको जानकारी दिएको छ । कार्यदलले युरोपका देश नेपाली कामदार आपूर्ति गर्नेसक्ने सम्भावाना र रोजगार देशका बारेमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो ।
कार्यदलले युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्याण्ड, स्वीडेन, क्यानडा, नर्वे र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिक रोजगारीमा पठाउन सक्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले पहिलो नेपाली श्रमिक युरोपलगायतका विकाशित देशमा पनि पठाउने लक्ष्य लिएका छन् । जसअनुसार विकसित देशको खोजी पनि भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Posted on May 1, 2018 May 1, 2018 Author
वैशाख १८, काठमाडौँ | एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता घोषणा गरेको सातमहिने शृंखला चलिरहँदा एकताको अन्तिम निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णायक संवादमा अड्किएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका दिन ९ वैशाखमा गर्ने भनिएको एकताको अन्तिम घोषणा दुवै अध्यक्षको पछिल्ला नियमित संवाद शृंखलामै अड्किएको हो । चुनावी […]
के तपाई भाडामा बस्नुहुन्छ ? त्यस्तोभए यो पढ्नुहोस, आयो यस्तो नयाँ नियम
Posted on April 29, 2018 April 29, 2018 Author
वैशाख १६, काठमाडौं । के तपाईंले घर भाडामा लिएर बस्नुभएको छ, पैसा छैन भनेर भाडा तिर्न हेलचेक्र्याइँ गर्दै हुनुहुन्छ कि? ३ महिनासम्म पनि भाडा नतिरी बेपत्ता हुनुभयो भने वडा कार्यालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ, घरमा ताला लगाएर लज्जित बनाउन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला। यो ऐन भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ। यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचार […]
विप्लवको उर्दीः निजी विद्यालय जनपरिषदमा दर्ता गर्नू
बैशाख १४, काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झापाका निजी विद्यालयलाई जनपरिषद्मा दर्ता गर्न उर्दीसहितको पत्र काट्न थालेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समानन्तर सरकार जनपरिषद् नेपाल नाममा यो पार्टीले प्याब्सनमा आबद्ध विद्यालयलाई पत्रचार गरेको हो । शुक्रबार जिल्ला प्याब्सन झापाका अध्यक्ष कोषराज प्याकुरेलललाई समेत पत्र पठाउँदै झापाका निजी विद्यालयहरुको विवरणसहित १५ […]